८ फाल्गुन २०७६ | February 20, 2020
​जहाँ भइरहेको छ अमेरिकी राजदूतको जुँगाको विरोध !
Saturday, 18 Jan, 2020 1:27 PM
४ माघ, काठमाडौं । ह्यारी ह्यारीस सन् २०१८ देखि दक्षिण कोरियाका लागि अमेरिकी राजदूत छन् । अहिले यतिबेला उनले कोरियाली जनताको व्यापक विरोध खेप्नु परेको छ । विरोध कुनै अलोकप्रिय कामका कारण होइन, ह्यारीको जुँगाका कारण भइरहेको छ । दक्षिण कोरियालीका अनुसार ह्यारीको जुँगाले जापानी उपनिवेशकालिन क्षणको झल्को गराउँछ ।
ह्यारीको जुँगाको विरोधमा उत्रिएका एक प्रदर्शनकारीले ‘नागरिकले ‘ह्यारीलाई दक्षिण कोरियाको राजदूतबाट हटाउनु पर्छ’ भन्ने नारा लगाएका थिए। सोही प्रवृत्तिको पर्चा पनि बोकिएको थियो। सन् १९१० देखि १९४५ सम्म कोरिया जापानको उपनिवेश बनेको थियो। त्यसबेला जापानी गभर्नर तथा आर्मीका जनरलहरुले जुँगा पाल्थे ।दोस्रो विश्वयुद्ध ताका जापानका प्रधानमन्त्री हिदेकी तोजोको पनि जुँगा थियो।
राजदूत ह्यारीको जन्म जापानी आमाबाट भएको हो। उनका अनुसार यसै कारणले पनि कोरियाली नागरिकले उनको आलोचना गरिरहेका छन्। खास विषय त के भने कोरियाको राजदूत भएपछि मात्र ह्यारीले जुँगा पालेका हुन्।
​गुण्डागर्दीमा संलग्न रहेको अभियोगमा एक जना पक्राउ
​सरकारी छाप दस्तखत किर्ते गरेको अभियोगमा पक्राउ
लेलेमा एक महिलाको हत्या गरेको आशंकामा सुर्खेतबाट एक व्यक्ति पक्राउ
​बम विष्फोट गराउने कार्यमा संलग्न रहेको अभियोगमा पक्राउ
​कैलालीमा आगोमा जलेर एक वृद्धको मृत्यु
महरालाई फेरि अर्को आपत आइलाग्यो ! सरकारी वकिल उच्च अदालतमा जाँदै
६ फागुन काठमाडौ । सरकारी वकिलको कार्यालयले निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराको विषयमा फैसला चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै उच्च अदालतमा मुद्दा पुनरावेदन गर्ने तयारी गरेको छ ।पूर्व सभामुख महरालाई अदालतले सफाइ दिएको विषयमा पुनरावेदन जाने सरकारी वकिल नुमराज खनालले बताए । यससँगै महरालाई अर्को संकट आइलाग्ने देखिएको छ । यता महराको निलम्बन भएको सांसद पद पुनर्बाहली हुने भएको छ ।संसद सचिवालयका उपसचिव
संवैधानिक अंग सरकारको कब्जामा : कोइराला
५ फागुन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला सरकारकै कारण संघीयता धरापमा परेको आरोप लगाएका छन्। कोइरालाले सरकार नियन्त्रितप्रजातन्त्रको अभ्यासमा लागेकाले संघीयता बेवारिसे बनेको बताए। कम्युनिष्टहरु जनवादी केन्द्रीयतामा आधारित शासन व्यवस्थामा विश्वास गर्ने भएकाले नेकपा सरकार नै संघीयताविरोधी रहेको आरोप लगाए।
५ फागुन, काठमाडौं । अफ्रिकी देश क्यामरुनमा एक गाउँमा भएको आक्रमणमा कम्तिमा २२ जनाको मृत्यु भएको छ । क्यामरुनको उत्तर–पश्चिमी क्षेत्रको गाउँमा आक्रमण भएको र सर्वसाधारणको ज्यान गएको संयुक्त राष्ट्रसंघले उल्लेख गरेको हो । तुम्बो गाउँमा भएको घटनामा मारिनेमा आधा बालबालिका रहेको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । अधिकांशलाई आक्रमणकारीले जिउँदै जलाएका हुन् ।